အကောင်းဆုံး အစီအစဉ် | Telenor Myanmar
တယ်လီနောရဲ့ Prepaid အစီအစဉ်အသုံးပြုသူ customer များအတွက် အင်တာနက်ကို အချိုသာဆုံးဈေးနှုန်းနဲ့ အသုံးပြုနိုင်မယ့် အစီအစဉ်နှစ်ခု လာပါပြီ။
သက်တမ်း ရက် ၃၀ အတွင်း 1 GB ကို အခွန်ပါဝင်ပြီး ဈေးနှုန်း ၉၉၉ ကျပ် တည်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သလို အင်တာနက်ပိုအသုံးများတဲ့ customer များအတွက်လဲ သက်တမ်း ရက် ၃၀ အတွင်း5GB ကို အခွန်ပါဝင်ပြီး ဈေးနှုန်း ၄၉၉၉ ကျပ် တည်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
*555# သို့ ခေါ်ဆိုပါ
သက်တမ်း ရက် ၃၀ အတွင်း 1 GB ကို ၉၉၉ကျပ်(အခွန်ပါဝင်ပြီး)တည်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ *555*1# /*555# ကိုခေါ်ဆိုပြီး အစီအစဉ်ကို ရယူနိုင်သလို Telenor App, WOW Box နဲ့ တယ်လီနော website မှလဲ အလွယ်တကူ ရယူနိုင်ပါတယ်။
သက်တမ်း ရက် ၃၀ အတွင်း5GB ၄၉၉၉ကျပ်(အခွန်ပါဝင်ပြီး)တည်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ *555*95# / *555# ကိုခေါ်ဆိုပြီး အစီအစဉ်ကို ရယူနိုင်သလို Telenor App, WOW Box နဲ့ တယ်လီနော website မှလဲ အလွယ်တကူ ရယူနိုင်ပါတယ်။
999 & 4999 အစီအစဉ်များကို ဘယ်လိုရရှိနိုင်မှာပါလဲ ?
Customer မှ အောက်ပါနည်းလမ်းများမှတဆင့်ရရှိနိုင်ပါတယ်။
1) Customer ၏ မိုဘိုင်းဖုန်းမှတဆင့် *555# ကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း။
2) Telenor အရောင်းဆိုင်အား POWER LOAD offer ကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း။
a) 999 အစီအစဉ်အတွက် တိုက်ရိုက်ခေါ်ဆိုရန် *555*1#
b) 4999 အစီအစဉ်အတွက် တိုက်ရိုက်ခေါ်ဆိုရန် *555*95#
3) MyTelenor App ၏ “ဝန်ဆောင်မှုများ” အောက်တွင် သို့မဟုတ် WowBox မှတဆင့်သော်လည်းကောင်း။
4) တယ်လီနောဝက်ဘ်ဆို််ဒ်မှ SHOP နှင့် Personal section ၏ အထူးအစီအစဉ်များ အောက်တွင်သော်လည်းကောင်း။
999 & 4999 အစီအစဉ်များမှာ Prepaid နှင့် Postpaid သုံးစွဲသူများအတွက် ရရှိနိုင်မှာပါလား
prepaid customers များသာ ရရှိနို်င်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
999 & 4999 အစီအစဉ်များကို အကြိမ်မည်မျှသာ ဝယ်ယူနိုင်မည်ဟု ကန့်သတ်ထားတာမျိုးရှိပါသလား။
မရှိပါ။ customer မှ 999/4999 ဒေတာအစီအစဉ်များကို မိမိစိတ်ကြိုက် အကန့်အသတ်မရှိဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ customer မှ တစ်ရက်အတွင်း 999 ဒေတာအစီအစဉ်ကို ၂ ကြိမ်ရယူခဲ့ပါက လက်ခံရရှိမည့်ဒေတာပမာဏမှာပေါင်းစည်းသွားမှာဖြစ်သည့်အတွက် 2GB (1GB x ၂ကြိမ်) ရရှိမှာဖြစ်ပြီး သက်တမ်းမှာ နောက်ဆုံးဝယ်သူသည့်ရက်မှ ရက် ၃၀ အတွင်း ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။
သက်တမ်းကာလကုန်ဆုံးပြီး လက်ကျန်ဒေတာကို ဆက်လက်သိမ်းဆည်းထားတာမျိုးများရှိပါမလား။
သက်တမ်းကာလကုန်ဆုံးပြီး လက်ကျန်ဒေတာကို ဆက်လက် သိမ်းဆည်း/သယ်ဆောင် သွားနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။
999/4999 ဒေတာအစီအစဉ်များအတွက် မြန်နှုန်းက ဘယ်လောက်ဖြစ်ပါသလဲ?
ဒေတာအစီအစဉ်အားလုံး၏ မြန်နှုန်းမှာ customer ရွေးချယ်အသုံးပြုသည့် မိုဘိုင်းဖုန်း (သို့မဟုတ်) ကွန်ယက် အပေါ်မူတည်ပါတယ်။
ကျွန်တော်က နေ့စဉ်သုံး Facebook အစီအစဉ်လည်းရှိတယ် 999/4999 ဒေတာအစီအစဉ်လည်း ရယူထားတယ်ဆိုရင် facebook အသုံးပြုမှုသီးသန့်အတွက် ဘယ်လက်ကျန်ဒေတာကို အရင် အသုံးပြုမှာလဲ။
ထိုကဲ့သို့အခြေအနေအတွက် သက်တမ်းကာလပေါ် မမူတည်ဘဲ Facebook အသုံးပြုမှုသီးသန့်အတွက် Facebook ဒေတာအစီအစဉ်မှသာ အရင်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်မှာ ညသုံးဒေတာအစီအစဉ်လည်းရှိတယ် 999/4999 ဒေတာအစီအစဉ်လည်း ရယူထားတယ်ဆိုရင် ည၁၁ နာရီမှ ၇ နာရီအတွင်း ဒေတာ အသုံးပြုမှုသီးသန့်အတွက် ဘယ်လက်ကျန်ဒေတာကို အရင်အသုံးပြုမှာလဲ။
ထိုကဲ့သို့အခြေအနေအတွက် သက်တမ်းကာလပေါ် မမူတည်ဘဲ ည၁၁ နာရီမှ ၇ နာရီအတွင်း ဒေတာ အသုံးပြုမှုသီးသန့်အတွက် ညသုံးဒေတာအစီအစဉ်မှသာ အရင်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်မှာ Data SuBoo လည်းရှိတယ်။ 999/4999 ဒေတာအစီအစဉ်လည်း ရယူထားတယ်ဆိုရင် ဒေတာအသုံးပြုမှုအတွက် ဘယ်လက်ကျန်ဒေတာကို အရင်အသုံးပြုမှာလဲ။
သက်တမ်းအရင်ကုန်မည့် ပက်ကေ့ချ်မှ အရင်ဖြတ်ပါမည်။
999/4999 ဒေတာအစီအစဉ်ဖြင့် VOIP ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၊ facebook messenger, viber, facebook, you tube တို့ကို သုံးလို့ရမှာလား။
ရရှိနိုင်ပါတယ်။ 999/4999 ဒေတာအစီအစဉ်ဖြင့် VOIP ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၊ facebook messenger, viber, facebook, you tube တို့ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
999/4999 ဒေတာအစီအစဉ်များကို E-Load မှတဆင့် ဝယ်ယူပါက ရပိုင်ခွင့်များ ပေါင်းစည်းသွားမှာပါလား။
999/4999 ဒေတာအစီအစဉ်များကို E-Load မှတဆင့် ဝယ်ယူပါက ရပိုင်ခွင့်များ ပေါင်းစည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ သက်တမ်းမှာ နောက်ဆုံးဝယ်သူသည့်ရက်မှ ရက် ၃၀ အတွင်း ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။
စျေးပိုများတဲ့ 4999 အစီအစဉ်ကိုဝယ်ယူလိုက်ရင် ဒေတာမြန်နှုန်း ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုခုရှိနိုင်ပါသလား။
တယ်လီနောဒေတာအစီအစဉ်အားလုံး၏ မြန်နှုန်းမှာ အစီအစဉ်၏စျေးနှုန်းပေါ်မူတည်မှုမရှိပါ။ customer ရွေးချယ်အသုံးပြုသည့် မိုဘိုင်းဖုန်း (သို့မဟုတ်) ကွန်ယက် အပေါ်မူတည်ပါတယ်။
ယခုအစီအစဉ်မှာ ကာလတို ပရိုမိုးရှင်းလား။ ရေရှည်ရယူနိုင်မယ့် အစီအစဉ်လား။
ယခုအစီအစဉ်မှာ ကာလတို ပရိုမိုးရှင်း ဖြစ်ပြီး ရက် (၉၀)အတွင်းအစီအစဉ်ရပ်ဆိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။
သုံးစွဲသူသည် ၉၉၉ ဒေတာ ပက်ကေ့ချ် ကို ၀ယ်ယူပါက “အပိုဆုနှင့် မှော် ၉၉၉ အစီအစဉ်” ကဲ့သို့ အပိုဆုများ ရရှိနိုင်ပါသလား?
ရရှိနိုင်ပါသည်။ သုံးစွဲသူသည် ၉၉၉ ဒေတာ ပက်ကေ့ချ် ကို ၀ယ်ယူပါက “အပိုဆုနှင့် မှော် ၉၉၉ အစီအစဉ်” ကဲ့သို့ 4GB(သို့) 2GB(သို့) 1GB အပိုဆုများထဲမှ တစ်ခု ရရှိနိုင်ပါသည်။
Promotion code is TEoki8t3e8 to get 20,000 Ks discount for minimum purchase of 60,000 Ks at shop.com.mm http://goo.gl/XuCiqW. Promotion Period valid until 6/18/2018.